प्रधानमन्त्री कुन पार्टी हो? सर्वोच्चलाई गएर सोध्नुस् : प्रधानमन्त्री - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
प्रधानमन्त्री कुन पार्टी हो? सर्वोच्चलाई गएर सोध्नुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुलाई कुन पार्टीको भनेर सोध्नेहरुलाई जवाफ फर्काउनु भएको छ । उहाले आफु कुन पार्टीको भनेर सर्वोच्च अदालतमा गएर सोध्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
१ सय ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उनले संसदमा आफूलाई कुन प्रधानमन्त्री भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने- यदि मैले उहाँलाई कुन पार्टीको हो भनेर सोधेँ भने?
आइतबार प्रचण्ड-माधव समूहका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फागुन महिनामा गरेका दुई फैसलाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा शक्तिशाली भुइँचालो ल्याइदिएको छ।
फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गर्ने गरी दिएको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता डगमगाउन पुग्यो। तर त्यही सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलाले उनै ओलीलाई फेरि शक्तिशाली बनाइदिएको छ।
ओली झन् शक्तिमा
फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हराइदियो, यसको अर्थ के हो भने पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको कदम गलत र असंवैधानिक ठहर भयो। तर, फागुन २३ गतेको फैसलाले प्राविधिक रुपमा ओलीलाई हराए पनि राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बनाइदिएको छ।
सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्टाइदिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयले ओलीले एउटा ठूलै धक्का खाए। तर उक्त धक्कापछि अफ्ठेरोमा परेका ओलीलाई सर्वोच्चले नै राहत दिँदै तङ्ग्राएर जुरुक्क उठ्ने बनाइदिएको छ।
संसद पुनःस्थापना भएपछि आफूहरुको जित भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले चितवनमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटेका थिए। संसदको पुनःस्थापनाले ओली अल्पमतमा रहेको ठहरसहित आफूहरुसँग बहुमत रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता पाउने दाबी उनीहरुले गरेका थिए।
यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिका एक निर्णायक पात्र ओली गम्भीर संकटमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री पदसँगै पार्टीको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा ओली संसदमा सबैभन्दा कमजोर नेता बनेको टिप्पणी हुन थालेको थियो।